Danjiraha Jabuuti: “Anagu marwaliba waxaan diyaar u nahay in dhiigeenna iyo dhaqaalaheenna aan u hurno walaalaheenna Soomaaliyeed”+Sawirro – Radio Muqdisho
Danjiraha Jabuuti: “Anagu marwaliba waxaan diyaar u nahay in dhiigeenna iyo dhaqaalaheenna aan u hurno walaalaheenna Soomaaliyeed”+Sawirro
Danjiraha Dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaliya. Aden Xassan Aden ayaa shaaca ka qaaday in weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay kooxaha nabad diidka Al-shabaab ku qaadaan xarun ay ciidamada AMISOM ee Jabuuti ku lahaayeen duleedka Magaalada Beledweyne uusan waxba ka badali doonin howlaha nabad ilaalinta ee ay ciidamada Jabuuti u joogaan gudaha Soomaaliya.
Danjiraha ayaa sheegay in ay sii wadayaan dadaallada ay ku nabadeynayaan Soomaaliya, ilaa iyo inta laga cirib tiraayo haraadiga kooxaha nabad diidka ee ku dhuumaaleysanayo qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
“Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee shalay lala beegsada xarun ay ciidamada Jabuuti ku lahaayeen duleedka Beledweyne waxba kama badali doono howlaha nabad ilaalinta ah ee aan ku caawineyno walaalaheen Soomaaliyeed. Anagu marwaliba waxaan diyaar u nahay in dhiigeen iyo dhaqaalaheena intaba aan u hurno walaalaheen Soomaaliyeed illaa iyo inta ay isku filnaasho ka gaarayaan” ayuu yiri Danjiraha dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya,. Aden Xassan Aden.
Danjiraha ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM si looga hortago qatarta ay kooxaha nabad diidka umaleegayaan shacabka Soomaaliyeed ee aanan waxba galabsan.
Hadalkaan ka soo baxay Danjiraha dowladda Jabuuti ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli shalay maleyshiyaad ka tirsan argagixisada Al-shabaab ay weeraro isugu jira ismiidaamin iyo qaraxyo ay ku qaadeen xarun ay ciidamada Jabuuti ku la haayeen galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.